Shirqoolkii dilkii afartii muwaadin iyo ku qabso-ku-qadimaysida reer xareed oo hadda soo shaacbaxay « SAWNEWS NETWORK
« Suldaan Galaal Oo KULMIYE Ku Tilmaamay Xisbigii Naasiga Ee Hitler Kana Digay Haddii uu Ku Guulaysto Doorashada Inuu Dalka Dagaal Sokeeye Ka Dhici dooono
Microsoft oo soo saartay Windows cusub . »
Shirqoolkii dilkii afartii muwaadin iyo ku qabso-ku-qadimaysida reer xareed oo hadda soo shaacbaxay
Posted by Sawnews.tk on October 21, 2009
Go’aano digniin ah oo ku socda beesha Samaroon ee ceelbardaale oo ka soo baxay shirwayne ay qabteen beesha reer xareed bishan October 18keedii waxa ka muuqda in beeshaasi sharci qabanaaya jirin. Waxa markhaati madoon ah sidda ka muuqata qaraaradan hoos ku qoran iyo dadka ku sexeexan in ay reer xareed ummada u sheegayaan in wax sharci ah oo qabaanayaa una jirin oo ay dad kale dhulkooda qaadan doonaan. Faalada horteed akhrista qaraaradan iyo dadka ku saxeexan;
Go’aamada ay soo saarayn Beesha Reer Xareed ayaa u dhignaa Sidan:-
“Beesha Reer Xareed ayaa shir ballaadhan ku yeeshay degaanka Ceelbardaale taariikhdu markay ahayd 18/10/2009, shirkaas oo la iskaga yimi miyi iyo magaaladaba oo laga wadahadlayey sidii loogu hawlgali lahaa dhulka beesha ka maqan, taas oo ay ka caddadaaladda waayeen xukuumadda maanta dalka ka talisa, kadib markii Guurtidu ay laba xukun oo ka soo saartay degaanka Ceelbardaale, xukuumadduna iska dhagatirtay fulinta xukunkaas, isla markaana beeshu waxay go’aansatay qodobadan hoos ku qoran;
1. In beeshu ku dhaqaaqdo tallaabo kasta oo ay dhulkooda maqan ku soo ceshanayaan, maadama ay xukuumaddu ka baaqsatay go’aanka Golaha Guurtida.
2. In aanay beeshu u dulqaadan dooni intii ay hore u dulqaataeen iyo qodobo kale.
Waxa kale oo ay beeshu baaq u diraysaa shacbiga reer Somaliland, golayaasha sharci-dejinta, salaadiinta, culima’udiinka iyo waxgaradka iyo dhammaan inta danaysa nabadda inay ka hortaagaan masiibadda halkaas ka soo socota ee uu masuulka ka yahay Ina Rayaale Kaahin. Cuqaasha iyo odayasha baaqa soo saaray.”
Magacyada cuqaasha iyo Odayaasha baaqaas ku saxeexnaa waxay kala yihiin;
Chief-caaqil Aw Yuusuf Magan Faarax, Caaqil Aadan Cilmi Ceelaabe, Caaqil Gaydh Cige Geelle, Caaqil Ibraahim Abraar Mixile, Oday Xaamud Xirsi Tubeec, Oday Cumar Barkhad Bullaale, Oday Maxamed Xadi Wacays, Oday Cabdixakiim Cumar Maxamed, Oday Xasan Aw Xuseen Cabbaase, Oday Cismaan Miigane Suldaan, Oday Cabdillaahi Axmed Caynaan, Oday Ismaaciil Nuur Dhinbiil, Oday Axmed Macallin Bashiir, Oday Maxamed Maal Raabbi, Oday Cabdillaahi Sheekh Axmed Muxumed, Oday Maxamuud Taani Geeddi, Oday Haybe Cali Khaliif, Oday Cabdillaahi Warsame Cumar, Oday Daa’uud Isaaq Xaaji, Oday Cumar Muxumed Sanyare.
Waxay ku cadeeyeen qoraalkan in ay sharciga wadanka u yaala ayna u hogaansanaan doonin oo ay dagaal diyaar u yhiin dhulkana xoog ku qaadanayaan.
Ceelbardaale waxay ka mitahay mashaakilaadkii Siyad Barre kaga tegay wadanka. Shirqoolkii Siyaad Barre iyo rag ka mid ahaa shaqaalihiisa oo ka soo jeeda reeraha hadda rabaa in ay xoog ku qaataan dhul ayna lahayn iyo reeraha kale ee Isaaq. Mashaakilkani wuxu sawaabiyaa mashaakiladii mustacmarka kaga tegay Africa. Mashruucii Ceelbardaale wuxuu ahaa mid rag doonayeen in qaataan dhul ayna lahayn. Waxa shirqoolkaas u xalaaleeyey Siyad Barre oo ku tilmaamay mashruuc dowladeed oo iskaashata ah. Arimahaasi dadkii ogaa way noolyihiin. Dadkii mu’aamaraadka ku jirayna qaarbaa ka nool. Arintii masruucu waxay isku badashay dal balaadhsi haddii nabad lagau waayo xoog lagu helo.
Shirqoolkii afarta muwaadin lagu gawracay ee lagu googooyay ragii ka masuulka ahaa waa raga isku cadeeyey go’aanada kor ku qoran. Labaataneeyaha nin ee kor ku qorani waa raga qarinaaya ragii raga laayey hadayna qaar ka midi ihi ku jirinba. Dowladu waxay ahayd dadka halkan isku cadeeyey in ay soo qabato markii ay keeniwaayeen danbiilayaashii dilay afarta muwaadin. Haddii dowlad, amni, iyo sharci ka jiro Somaliland, dadkaasi go’aanka soo saaray ee is cadeeyey in ay ka masuulyihiin reer xareed waa in la soo qabtaa u sharciga lala tiiksadaa. Inta kor ku saxeexani iyaga ayaa gacantooda isku soo xidhay iskuna markhaati furay. Uma baahna in dad kale la raadiyo. Iyaga ayaa sheegi doona dadkii laayey afartii muwaaadin iyo intii kale ee beelaha laga dilay. Hanjabaada intaas le’eg ee ku socota dowlada iyo beesha (reer Maxamuud Nuur) Samaroona waa mid u baahan in ay dowladu ka hor tegto intay goori goor tahay. Haddii kale nabad galyada reerahaasi isku haya Ceelbardaale halis bay ku jirtaa. Waxayna saamayndoontaa ummada Somaliland oo dhan.
Haddii dawladu u afduuban tahay cuqaasha iyo odayaasha kor ku saxeexan ha u cadayso ummada Somaliland oo ha u sheegto in ayna soo qaban karaynin kartina u lahayn in ay fuliso sharciga u yaala Somaliland. Uma baahna dowladu in ay raadiso dad kale iyada oo arkaysa, qoraala ku haysaa dadka mashaakilka wada. Inta kor ku qorani waa inta daboolka saartay siddii loo heli lahaa danbiilayaashii iyo dadka fidnada wada. Waxay yihiin fidnoolayaasha ka warqaba ama ka mid ah dandbiilayaashii raga gawracay dab kana ka huriya reeraha dhexdooda. Kama foga shirqooladu cuqaasha iyo odayaasha ku saxeexan go’aanada ka so baxay shirka reer xareed. Mushkilada nimankaasi wadaani af la qabto ayey leedahay ee dabo la qabto ma yeelan doonto.
This entry was posted on October 21, 2009 at 5:47 pm	and is filed under Articals. Tagged: Articals. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.